5a-hydroxy Laxogenin budada (56786-63-1) Soosaarayaasha & Shirkadaha - Warshadaha
Root 5a-hydroxy Laxogenin waa faleebo spirostanic ee brassinosteroid. Waxaa lagu ogaaday cilmi-yaqaan Maraykan ah 1996. Waxaa loo muujiyay in uu leeyahay walxaha anaboole / istrogenic oo la mid ah mid ka mid ah walxaha anabolic ee ugu waxtarka badan, waxay aad u la mid tahay kuwa ka mid ah walxaha anabolic ee ugu waxtarka badan, anavar, laakiin aan lahayn saameynta daawada qamriga beerka ama tijaabin wanaagsan ee daaweynta steroidal ah.
Qalabka Xawaadha Xamma-hydroxy Laxogenin (5-56786-63) video
Root 5a-hydroxy Laxogenin budada (56786-63-1)
5a-hydroxy-laxogenin waa analogue spirostanic ee brassinosteroid. Waxaa lagu ogaaday cilmi-yaqaan Maraykan ah 1996. Waxaa loo muujiyay in uu leeyahay saamiga anabolic / androgenic oo la mid ah mid ka mid ah walxaha anabolic ee ugu waxtarka badan, waxay aad u la mid tahay kuwa ka mid ah walxaha anabolic ee ugu wax ku oolka badan, anavar, laakiin aan lahayn saameynta daaweynta beerka sunta ama tijaabin ku habboon daaweynta steroidal.
Warbixin ka soo baxday miiska cilmi baarista Ruushka ayaa muujisay in 5α -Hydroxyl laxogenin uu leeyahay dardar-galinta miisaanka koritaanka jiirka isagoo kordhinaya miisaanka xubnaha jirka sida beerka, wadnaha, kelyaha, musilus tibiliasis anterior iyo sidoo kale kordhinta qadarka guud ee borotiinka. Isbeddelada tirade ee kor ku xusan waxay noqdaan kuwo aad u daran oo leh maaddada daraasadda siinaysa xayawaanka yaryar. Waxaa la muujiyey in 5α-Hydroxy laxogenin loo isticmaali karo cayaartoyda iyada oo kor u qaadeysa awoodda maalmaha 3-5 iyo muruqyada kordhay toddobaadka 3-4. Farsameynta muruqyada iyo kor u qaadida dardargelinta ayaa ah natiijada ka soo baxday dheellitirka borotiinka ee kor u kaca ee 200%. Cilmi baaris dheeraad ah oo ku saabsan meco-bararka ayaa muujinaya in sidoo kale loo isticmaali karo in lagu dheellitiro jawaab celinta cortisol taas oo laf-dhabarka u ah soo kabashada iyo hoos u dhaca muruqyada.
Dufanka 5a-hydroxy Laxogenin (56786-63-1) Smamnuucista
Product Name Root 5a-hydroxy Laxogenin
Magaca Kiimikada 5alpha-Hydroxy laxogenin; (2AR,2’R,4S,5’R,6aR,
Fasalka Daroogada Steroid
Molecular Wsideed 446.628 g / mol
barafku Psaliid 288-291 ℃
Root 5a-hydroxy Laxogenin budada Application (1) Waxay ka caawisaa kor u qaadista dheecaanka borotiinka ee ka sarreeya 200% kaas oo u oggolaanaya inuu isticmaalo isticmaalka kobaca muruqyada iyo soo kabashada.
(2) Waxay bixisaa taageero cortisol, taas oo u oggolaaneysa jirkaaga inuu si dhakhso ah u soo kabsado oo uu yareeyo burburka muruqyada (murqo gaabis ah).